Ajụjụ - AnHui Gaoge Intelligent Equipment Co., Ltd.
Kedu mgbe bụ nnyefe ma ọ bụ oge ndu?
Dabere na gị iji, maka dum mmepụta akara dị ka akpa bụrụ mbukota, akpa na akpa mbukota, ejikari ọ bụ 45-60 ụbọchị. Ngwongwo ndi ozo dika igwe ihe ndi VFFS, igwe eji emeputa ngwa ngwa, ime ka ndi mmadu mechie onu ha, ha bu ubochi 30-45. N'oge elu, ọ nwere ihe jikọrọ ya na usoro mmepụta anyị.
Onwere opekata mpe ide ihe?
Ee, ikwesiri ịzụta 1 igwe nke igwe ọ bụla dị ka iwu kacha nta. Dị ka 1 set nke VFFS nkwakọ igwe, 1 set nke pre-mere obere akpa nkwakọ igwe, 1 set nke na-emeghe ọnụ bagging igwe.
Kedu maka ụzọ ịkwụ ụgwọ?
Anyị na-anabata TT, 50% TT dị ka ụgwọ ala na 50% TT dị ka ụgwọ nkwụzi ụgwọ tupu mbupu.
Gịnị bụ ọnọdụ nke nnyefe?
Enwere ike ibuga igwe ma obu site na mmiri ma obu site na ikuku, anyi nwere ike inye FOB, CNF, okwu CIF dika ihe ndi ahia choro. Maka nnukwu igwe dị ka igwe na-emeghe ọnụ, anyị ga-atụ aro ịbuga n'oké osimiri.
Gịnị banyere Mbupu mbukota?
Anyị na-eji ọkọlọtọ mbupụ mbukota ihe. Maka Europe na Australia, anyị na-eji igbe osisi fumigated. Maka North America, South America na Africa, anyị na-eji igbe osisi ejiri aka atọ ma ọ bụ akpa osisi fumigated. Maka Asia, anyị na-eji igbe osisi ma ọ bụ osisi osisi ply atọ.
Kedu ihe achọrọ iji nweta ike?
N'ikwu okwu n'ozuzu, enwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ ma ọ bụ 220v 1phase ma ọ bụ 110v 1phase ma ọ bụ 380v 3phase ma ọ bụ 220v 3phase, wdg.
Kedu onye ga-etinye akụrụngwa ahụ?
Maka otu akụrụngwa dịka igwe nkwakọ ngwaahịa VFFS, igwe ihe eji eme akpa, akpa igwe na-emeghe ọnụ, n'ozuzu anyị ga-enye akwụkwọ ntuziaka na vidiyo iji nyere ndị ahịa aka ịwụnye akụrụngwa. Maka ngwakọ nkwakọ ngwaahịa niile dịka akpa ma ọ bụrụ na ị na-akwakọba ihe, akpa na akpa akpa, anyị ga-eziga onye ọrụ ntanetị iji nyere aka na ụlọ ọrụ ndị ahịa, onye na-azụ ahịa ga-akwụ ụgwọ maka tiketi ụgbọ elu njem, nri, ụgwọ ụlọ na ụgwọ kwa ụbọchị
Kedu maka ọrụ ahịa mgbe emesịrị?
Anyị ga-enye nkwado mmezi maka nsogbu ọ bụla na akụrụngwa. Ọ bụrụ na akụrụngwa ahụ ka dị na akwụkwọ ikike, anyị ga-edochi ma rụkwaa akụkụ ndị ahụ na-ezighi ezi n'efu na onye zụrụ ya ga-akwụ ụgwọ naanị maka mbupu ma ọ bụ ụgwọ ikuku. Na mkpokọta, anyị nwere ike ibufe akụkụ ahụ ezighi ezi nke dị na ngwaahịa n'ime ụbọchị 1.
Open-ọnụ Bagging Machine Ajụjụ --- Kedu ngwaahịa ọ nwere ike ibute?
A na-eji igwe a maka ịkọ mkpụrụ, nri, cubes, pusi lit, cements, chemical, coal, fatịlaịza, flake, PET food, osikapa, ájá, pellets wdg.
Open-ọnụ Bagging Machine Ajụjụ --- Olee mgbe nnyefe ma ọ bụ ụzọ oge?
Ebute oge bụ ụbọchị iri isii.
Open-mouth Bagging Machine Ajụjụ --- Olee ụdị akpa mkpọ maka igwe ihe eji eme akpa?
gussets, ọkọlọtọ ohiri isi akpa ma ọ bụ ngọngọ / obe ala akpa, na ma ọ bụ na-enweghị handle.PE akpa, kpara akpa, eyi akpa, akwụkwọ akpa
Open-ọnụ Bagging Machine Ajụjụ --- Gịnị bụ mbukota olu?
Open-ọnụ Bagging Machine Ajụjụ --- Gịnị bụ mbukota ọsọ?
Dị ka dị iche iche na ngwaahịa, mbukota ọsọ nwere ike ịbụ 8-12 akpa / min.
Igwe akụrụngwa na-emepe emepe Ajụjụ --- Ọ nwere ọnụọgụ opekempe iji nye iwu?
Ee, ikwesiri ịzụta 1 igwe nke igwe ọ bụla dị ka iwu kacha nta.
Igwe akụrụngwa na-emepe emepe Ajụjụ --- Gịnị bụ akara nke ngwa eletriki?
Imirikiti akụrụngwa nabatara akara mba ụwa, dị ka Siemens Touch screen & PLC wdg, Panasonic servo moto, na Omron, Schneider wdg.
Igwe akụrụngwa emeghe-ọnụ Ajụjụ --- Gịnị bụ ikike ọkọnọ chọrọ?
Open-ọnụ Bagging Machine Ajụjụ --- Gịnị banyere Mbupu mbukota?
Open-mouth Bagging Machine Ajụjụ --- isnye ga-etinye akụrụngwa ahụ?
N'ihi dum nkwakọ akara dị ka akpa bụrụ mbukota, akpa na akpa mbukota, anyị ga-eziga ẹkesikpede aka na ndị ahịa si factory, asịwo naanị mkpa ịkwụ ụgwọ maka njem njem ikuku tiketi, nri, ụlọ mmefu na kwa ụbọchị nkwere.
Open-ọnụ Bagging Machine Ajụjụ --- Olee banyere mgbe ahịa ọrụ?
Anyị ga-enye nkwado mmezi maka nsogbu ọ bụla na akụrụngwa, oge ikike bụ ọnwa 24. Ọ bụrụ na akụrụngwa ahụ ka dị na akwụkwọ ikike, anyị ga-edochi ma rụkwaa akụkụ ndị ahụ na-ezighi ezi n'efu na onye zụrụ ya ga-akwụ ụgwọ naanị maka mbupu ma ọ bụ ụgwọ ikuku. Na mkpokọta, anyị nwere ike ibufe akụkụ ahụ ezighi ezi nke dị na ngwaahịa n'ime ụbọchị 1.
Ertdị Vetical Mejupụta Ngwa Nkwakọ ngwaahịa Ajụjụ --- Gịnị bụ ojiji nke igwe a?
Enwere ike ịkwadebe ya dị iche iche na-ejuputa ngwaọrụ maka mmiri mmiri dị iche iche, ntụ ntụ, ngwaahịa granule, dị ka Multi isi weigher, Auger filler, mpempe akwụkwọ mmiri mmiri, igwe nju igwe na ihe ndị ọzọ pụrụ iche na-ejuputa ngwaọrụ.
Ertdị Vetical Mejupụta Ngwa Nkwakọ ngwaahịa Ajụjụ --- Olee mgbe nnyefe ma ọ bụ oge mbu?
Dabere na gị iji, ejikari ọ bụ ụbọchị 30 maka ọkọlọtọ igwe.
Vdị Vertical Wet Seal Packaging Machine FAQs --- Kedu ụdị akpa maka igwe nkwakọ VFFS?
Pillow pouch, obere akpa gusset, obere akpa stabilo, quad seal pouch.
Ertdị Vertical Wet Seal Packaging Machine FAQs - Enwere ọnụọgụ kacha nta iji nye iwu?
Opekempe iji buru ibu bụ 1 set
Vdị Vetịl Mejupụtara Ngwa Nkwakọ Ngwa Ajụjụ --- Gịnị bụ akpa akpa igwe nwere ike iburu?
Anyị nwere ike ịnye igwe VFFS dị iche iche dị iche iche maka nha akpa, gụnyere GVF-420, GF-520, GVF-720, GVF-1100.
Ertdị Vetical Mejupụta Ngwa Nkwakọ ngwaahịa Ajụjụ --- Gịnị bụ akara nke ngwa eletriki?
Vetikal Form Mejupụta Akara Packaging Machine Ajụjụ --- Gịnị bụ ọnọdụ nke nnyefe?
Enwere ike ibuga igwe ma obu site na mmiri ma obu site na ikuku, anyi nwere ike inye FOB, CNF, okwu CIF dika ihe ndi ahia choro. Maka nnukwu igwe dị kaemeghe ọnụ bagging igwe, anyị ga-atụ aro ịtụ ụgbọ mmiri site n'oké osimiri.
Obere akpa obere akpa Packaging Machine Ajụjụ --- Gịnị bụ ojiji nke a igwe?
Obere akpa obere akpa Packaging Machine Ajụjụ --- Olee mgbe nnyefe ma ọ bụ oge ndu?
Igwe ihe eji ebu akpa a na-eme obere akpa --- Gịnị bụ akpa akpa igwe nwere ike iburu?
Ogologo akpa kwesịrị ịbụ ihe karịrị 80mm.
Peech Packaging Machine Ajụjụ Ndị Mere - --- Olee ụdị akpa mkpọ maka igwe ihe eji eme akpa?
Peeji akpa, Mpempe Doypack, Mpempe akwụkwọ, Guesst pouch, akpa n'akụkụ anọ
Obere akpa Packaging Machine Ajụjụ --- Gịnị bụ ika nke electric akụrụngwa?